I-4u PRO - Indawo yolwazi
Imodi yePaspoti, ukubhaliswa
IiHososcopes, iMicrosoft, Ukuhlanjululwa
Iikhowudi, iiNkcazo, iiNkcukacha
Ukutshata, Uthando, Ubuhlobo
Izihloko kubantu abadala
Izixeko kunye namazwe
I-Shawarma - zokupheka ezithakazelisayo zokupheka ukutya okudliwayo ekhaya
22.12.2018 Ushiye uluvo
I-Shawarma - zokupheka ezithakazelisayo zokulungiselela ukutya okudliwayo ekhaya. I-East yazisa izitya zaseYurophu ezininzi izitya, ezisaziwa kakhulu namhlanje. Esinye salezi zipho sasingu-shawarma - iresiphi evela kwi teknoloji yokupheka isitya esidala kakhulu-kebab. Thin pita kunye ...
Amasiko omNyaka omtsha kwiLizwe loKhuphuka kwelanga
Amasiko omNyaka omtsha eJapan. Amasiko omNyaka omtsha eJapan. IJapan iyaziwa ngokuba neenkcubeko ezininzi, kwaye iiholide zonyaka omtsha azizange zihambe ngaphandle kwazo. Ngaba ungathanda ukwazi ukuba zithini iinkcubeko zoNyaka omtsha eJapane ngaphambili nangoku? Emva koko funda. Amasiko ahloniphekileyo ...
Izibheno ezinobumba zithandwa kakhulu kwitafile zonyaka
Izibheno ze-Cold zithandwa kakhulu kwitafile yonyaka omtsha. Iindidi ezinokuhlwaya, ezihle kunye nokuhlala ezihlaziyiweyo ziqinisekisiwe ukuba zifakwe kwimenyu yeliholide, kwaye intlanganiso ye-2019 entsha yeNgqayi eYilongwe yintlanzi ayikho. Nabaninimzi abanakekelayo, balungiselela ukufumana iindwendwe ekhaya, kwangaphambili ...
Unyaka omtsha kwiLizwe lokuSuka kwelanga: Amasiko
Unyaka omtsha eJapane: izithethe Zonyaka omtsha eJapane (iJapan. O-shogatsu) yeholide ethandekayo kunye nemibala, egujwa ngoJanuwari 1 ngokwekhalenda kaGregory, eyamkelwa kwiwaka elinesibhozo elinamanci asixhenxe anesithathu, kwiminyaka emihlanu emva kokubuyiselwa kweMeiji. Ngaphambi kokuba ...
I-snack ye-cheese "i-Snowman"
I-snack ye-Cheese "i-Snowman" I-snack ekhethiweyo kwitafile yokutya. Izithako: Siqhubeka silungiselela uNyaka omtsha! Namhlanje ndifumana iresiphi yokutya okutyiwayo kakhulu, kwaye kungekhona nje ushizi, kodwa kwiintlobo ezimbini zeeshizi, ezizalisana ngokupheleleyo. Iziqholo ...
Ukupheka kweeNtsholongwane zonyaka omtsha I-2019 zokupheka kunye nezithombe ezilula kwaye ezihlwaya
Ukupheka kweeNtsha zoNyaka zonyaka omtsha I-2019 zokupheka kunye nezithombe zilula kwaye zihlwaya. Ixesha likhawuleza. I-autumn isifikile nje. Uthe wathululela imvula kunye nemimoya embi, walala ebomvu elinamaphepha amaninzi. Kodwa ukutshatyalaliswa kwentsasa eqhwitha kuqala ukuvela emoyeni, yokuqala ...
Unyaka omtsha kwiLizwe loKhuphuka kwelanga: Amasiko kunye neNkcubeko
21.12.2018 Ushiye uluvo
Unyaka omtsha eJapan: amasiko kunye nezithethe. Njengoko unyaka omtsha eJapan ugubha uNyaka omtsha eJapan yenye yeeholide ezizithandayo. Emva koko, iiholide, ezidlulileyo ukusuka ngoDisemba kumashumi amabini anesibhozo ukuya ku-4 kuJanuwari, zimisa phantse bonke ubomi bezoshishino kweli lizwe. ...
Unyaka omtsha kwiLizwe lokuKhuphuka kwelanga, iRhafu kunye neNkcubeko
Unyaka omtsha eJapan Unyaka omtsha yiyona holide enkulu kunazo zonke amazwe kunye nabantu. Le yeholide enokuvumela ukuba uthathe isabelo seminyaka edlulileyo, khumbula okwenzekayo kunyaka odlulileyo, ujonge iziganeko ezivuya kwaye ngokukrakra uyakhumbula kwaye uqhube abo ...
Ukupheka kweNyakatho yoMtsha
Iingcebiso zokupheka kwonyaka omtsha ndinika enye yeendlela zokupheka uJulien. Ngovuyo lonxibelelwano! Ukupheka kukaHelen Chekalova Kodwa kude nakwiiyokazi zonke izindlu zinekhwenkco ekhitshini, kodwa ungadla ijeli nje kuphela kwi-cafe okanye kwindawo yokutyela. Cook ihle ...
Izithethe zaseJapan zonyaka omtsha kunye nokuphatha
Izithethe zaseYapane zonyaka omtsha kunye nokuziphatha Siza kukuxelela malunga nezinye izithethe zoMthendeleko woNyaka olutsha eJapan, oluquka iinkcubeko ezingaqhelekanga kwiSlav eneentsingiselo ezikhethekileyo. Kwaye siya kukwabelana ngesidumbu sokutya okumangalisayo okuJapan, okulungiselelwe ngokukodwa ...